Kolontsaina Koreana - K-POP :: Hahazo loka avokoa ireo mpandray anjara rehetra • AoRaha
Kolontsaina Koreana – K-POP Hahazo loka avokoa ireo mpandray anjara rehetra
Miatrika ny fitsarana ny vokatra ankehitriny ireo nandray anjara tamin’ilay fifaninanana kolontsaina koreana, « Kpop lockdown contest Madagascar ». Hatramin’ny 3 aogositra no hametrahana ny horonantsarin’ ireo mpifaninana eo amin’ny kaonty Facebook-ny tsirairay avy. Ny marika #FightCovid19 # MijanonaaoAntrano sy #AmbassadeCoreeMadagascar ary #TsingudelaCoreeMadagadagascar no hahafahan’ ny masoivohon’i Korea sy ny fikambanana « Tsingu de la Corée du Sud » mandray sy mitsara ireo horonantsary.
Hamoaka ny valin’ny fitsarana fihodinana voalohany ny mpikarakara amin’ny 5 aogositra ho avy izao. Hahazo loka avokoa ireo mpandray anjara rehetra na tsy tafakatra amin’ny dingana manaraka aza. Ny masoivoho no hisafidy ny hira ho an’ireo tafakatra dingana famaranana ka mbola havoaka amin’ny fotoana manaraka ny mombamomba izany.
Tsy hanavahana ny fandraisana anjara fa nasaina avokoa ireo izay tia an’ity Kolontsaina koreana ity. Mizara roa izany ka ny sokajy voalohany no ho an’ireo famerenana hira ary ny faharoa ho an’ny dihy.
Fiantraikan’ny valanaretina :: Ahiana hihemotra ny lalaon’ireo mpiasam-panjakana